Ho any Kildare | Fizahan-tany | Fialam-boly ankohonana | Atsinanana Fahiny any Irlandy
Tsy manohana horonan-tsary HTML ny browser-nao.
Jereo hoe inona no maharesy ny fonao
Tongasoa eto amin'ny tranonkala fizahan-tany ofisialin'ny County Kildare izay ahafahanao mitady zavatra atao ary fantaro inona ny, ary koa ny fahazoana aingam-panahy noho ny fitsidihanao an'ity faritra mahafinaritra ity.
Fifangaroana be voninahitra taloha sy vaovao; Kildare dia iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra hitsidika an'i Irlandy izay ankasitrahan'ny olona sy ny olona rehetra an-tsitrapo. Malaza eran'izao tontolo izao noho ny hazakaza-tsoavaly sy ny sary mahafinaritra, entanin'ny olona lehibe, sakafo, fiantsenana & toerana to mijanona.
Ny manodidina tanàna sy vohitra manolotra sombin-traikefa amin'ny mpitsidika ao anatin'izany ny tanàna tsena fahita, trano fisotroana nentim-paharazana sy toerana maitso tsara sy lalan-drano hozahana amin'ny tongotra na bisikileta.
Ankoatr'izay, kalandrie feno hetsika sy fety kilasy eran'izao tontolo izao - manomboka amin'ny Punchestown Festival manan-tantara ka hatramin'ny Taste of Kildare mahafinaritra amin'ny Krismasy 2021 - hampifaly anao mandritra ny taona i Kildare!
Ka inona no andrasanao? Fotoana hidirana ao amin'ny Kildare!
Manandrana an'i Kildare amin'ny Krismasy
Ny tsara indrindra amin'ny Kildare
Any amin'ny fihaonan'ny renirano roa, The Rye & the Liffey, Leixlip dia manana hetsika ivelan'ny trano sy lalan-kely. Mijoroa amin'ny talenta amin'ny tranobe tsy manam-paharoa corkscrew, ilay Wonderful Barn, avelao ny ankizy hihazakazaka eny Fort Lucan, ary milalao lalao golf ao amin'ny Palmerstown Estate mahagaga.
Amin'ny maha-tanàna lehibe indrindra ao Kildare, Newbridge dia betsaka ny zavatra azo atolotra. Makà seho ao amin'ny Riverbank Arts Center, makà trinket manokana ao amin'ny Newbridge Silverware malaza na mandraisa lalao GAA mafy ady.
Kildare dia manan-karena amin'ny kolontsaina, lova, fiantsenana ary fisarihana. Mandany andro amin'ny hazakazaka any amin'ny hazakazakazakazakazakazakazaka malaza any Curragh malaza izao, ny fifanarahana am-pahefan'ny mpamorona ao amin'ny toeram-pivarotana sy ny sakafom-pisakafoanana dia hahafaly ireo andiana trano fisakafoanana sy trano fivarotana gastro nahazo loka.
Any ambanivohitr'i Naas dia azonao atao ny manasongadina ny hetsika ataon'ny firenena toy ny mitaingin-tsoavaly, golf ary ny fitsidihana ireo tany lehibe taloha. Naas dia eo amin'ny Grand Canal tamin'ny taonjato faha-18, izay tsara tarehy tahaka ny sary, ary mazava ho azy, manan-karena kolontsaina mitovy tototry ny hazakazaka amina hazakazaka maro sy toeram-piompiana stud ny faritra.
Ny tanàna manan-tantara ao Maynooth no hany oniversite ao Irlandy ary ivon-toerana velona feno fitsangantsanganana, kafe, fisakafoanana ary zavatra hatao. Io dia notehirizin'i Maynooth Castle tamin'ny faran'ny tanàna, ary ny Carton House tamin'ny taonjato faha-17.
Clane ("the slanted ford") dia toerana misy ny angano sy ny tantara. Amin'ny maha-fiampitana ny Liffey azy dia napetraka hatramin'ny vanim-potoana vato. Mandehandeha eny amoron'i Liffey mahafinaritra na mitsidika toeram-pambolena biby miaraka amin'ny fianakaviana.
Ity tanàna tsena mahafinaritra eto amoron'ny Renirano Barrow ity no toerana nahaterahan'i Sir Ernest Shackleton, mpikaroka tany Arktika malaza. Mandehana fitsangatsangana an-tsambo amam-pitsangatsanganana rehefa mandena ny manodidina ny vanim-potoana antonony.
Jereo ny tantara sy lova manan-karena ao amin'ity tanàna Liffeyside mahafinaritra ity. Jereo ny tantaran'i Arthur Guinness, mandehana amin'ny moron'ny lakandrano milamina ary tsidiho ny sasany amin'ireo 'trano lehibe' any Zeorziana Irlandy.
Atombohy ny fandaminana ny dianao
Aiza no hihinana sy hisotro
Jereo ny trano fandraisam-bahiny
Fialam-boly ankafizin'ny mpianakavy
Jereo izay mitranga izao ao amin'ny County Kildare! #intokildare